स्वास्थ्य / जीवनशैली | Sunaulo Khabar | पृष्ठ 3
घरमै गोलभेडा फलाउने सजिलो विधि
तपाईं-हाम्रो भान्सामा नभई हुन्न, गोलभेडा । सागसब्जीमा मिसाउन होस् वा अचार बनाउन, गोलभेडा चाहिन्छ । तरकारी, दाल, अचारदेखि सलादसम्ममा गोलभेडा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले त हाम्रो भान्सामा धेरै खपत हुनेमध्ये एक हो, यो । गोलभेडाले खानेकुराको स्वाद बढाउने, रंग आकर्षक...
अहिले बजारमा आँपको सिजन चलेको छ । हामी बजारबाट खान योग्य पाकेका आँप किनेर खाने गर्छौं । देशका विभिन्न ठाउँबाट आउने भिन्दाभिन्दै प्रजातिका आँपले काठमाडौंको बजार ढाकेको छ । तर यस्ता आँप उपभोगका लागि सुरक्षित छन् त ? सामान्यतयाः हामीले...
के मेकअप गर्ने महिला सक्षम हुँदैनन् ?
‘मैले बाल्यकालदेखि नै मेकअप गरेकी थिइन । एकदिन मैले रातो लिपस्टिक खरिद गरें । दोस्रो दिन अफिस जानुभन्दा अगाडि लिपस्टिक लगाएँ । जब म अफिस पुगें, केटामात्र होइन केटीहरु पनि मलाई छक्क परेर हेर्न थालें । मानौं म एलियन...
काठमाडौं उपत्यकाका यी ठाउँमा लगाइने छ भेरोसेलको दोस्रो डोज
काठमाडौं : कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानअन्तर्गत असार २२ देखि २४ गतेसम्म ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने भएको छ। गत जेठ २५ देखि २९ गतेसम्म भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ६० देखि ६४ वर्ष उमेर...